Kedu ihe prolongation pụtara? Nkọwapụta nke ụbụrụ ego
Malite mgbazinye ego Wiki ebu-n'elu
Ka e were ya na ịchọrọ ịchọta ego ma ọ bụ ịrịọ ụlọ akụ?
Mgbe ahụ, ọ na - arụ ọrụ dị ukwuu na ị na - agwa onwe gị ụdị ihe niile na - agụnyekwa ebu-n'elu, Nke a bụ ndọtị nke nkwekọrịta ịkwụ ụgwọ ahụ n'ezie. Ị ghaghị ịmara na ị ghaghị ịkwụghachi ego n'ime oge ụfọdụ.
Na mgbakwunye, Otú ọ dị, ọ na-ewusi elu ike na a ga-akwụ ụgwọ maka mmasị a na mbinye ego a. Otú ọ dị, ọ na-abụkarị ụtụ mmasị ma ọ bụghị ọnụ agbanwe. A na - ejizi prolongation ma ọ bụrụ na ị chọpụta mgbe oge ụfọdụ na ị gaghị akwụghachi ụgwọ ahụ n'ime oge ịgba. Ha ka nwere ike ịgbalịsi ike, ma ọ dịghị ihe fọdụrụ na ngwụsị ọnwa.
Mgbakwunye bụ arịrịọ e dere ede na ụlọ akụ. Nke ahụ bụ, ị na-etinye maka mgbakwunye otuto. Akpokọtara usoro nkwekọrịta ahụ kpamkpam. Ha na-enye ụkpụrụ ọhụrụ wee mechie ya. Otú ọ dị, ị ghaghị ịma na akwụmụgwọ a adịghị mkpa ka a kwadoro ya. Ụlọ akụ ahụ pụkwara ịjụ ikwe ka rollover ahụ. Mgbe ahụ ị nwere nsogbu.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ na-egosi na ị na-enwe ihe isi ike na ịkwụ ụgwọ, nakwa na ị nweghị ike ịkwụ ụgwọ ọ bụla ọzọ, ụlọ akụ ahụ ga-enwe afọ ojuju na ụlọnga n'ihi na ọ na-enye gị ohere ịkwụghachi ụgwọ ahụ. Nkwụ ụgwọ a ekwesịghị ịdị elu. Mgbe ị kwụsịrị ịgbazinye ego, ị ga-achọpụta n'oge na-adịghị anya na ị na-eme nkwa ịkwụ ụgwọ. N'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-akwụghachi ego ahụ, ma ọ bụrụ na mberede, ị ga-ama ikpe. Ịkwesịrị ịtọ ọnụego nke ịgbazinye ego ka i wee nwee ike ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa. Mbinye ego a ga - agbatị ya, ma enweghi ike izere nke a n'ọnọdụ ụfọdụ. Ị ghaghị ịṅa ntị n'ihe nile ma jide n'aka na ị nwere ike ịkwụghachi ego ahụ. E kwesịrị ịkwụ ụgwọ ego ahụ ozugbo enwere ike. Ya mere ị nwekwara ike ịchịkwa ihe niile ka mma ma zere ihe ndọtị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-etinye ego n'ihi na ha chọrọ ịzụta ụgbọ ala ma ọ bụ ụlọ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-elebakwu anya na ego gị.
Ị ga-eche nke ọma ma ị ga-akwụ ụgwọ ọnwa kwa ọnwa. Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ ụgwọ, mgbe ahụ, ọ nwere ike isi ike ịchọrọ ọnọdụ ahụ, ma ọ bụrụ na ọ na-ebuli ụzọ bụ ụzọ ikpeazụ. Otú ọ dị, ọ dịkarị, nke a bụ nanị ihu na njedebe nke okwu ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, a ga-enye gị ntụziaka ka mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ onye ndụmọdụ ụlọ akụ gị. Ị ghaghị ijide n'aka na ụlọ akụ ahụ nọ n'ọnọdụ ọbụla maka ha ma dị njikere izute gị. Ya mere, i nwere ike igbanwe ọnụego ya na ntinye ya na ị gaghị atụ egwu nke onwe gị. I nwekwara ike izere mmanye. A pụrụ itinye ego n'ọrụ taa. Ma ị ga-enwekwa nchebe ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọnụego ndị dị ala dị ka o kwere mee. Ọ bụ ezie na ogologo oge agbatịla, ma na ụlọ a ga-aba uru ọ bụla ikpe. N'ime ụgbọ ala, n'aka nke ọzọ, uru ahịa na-ada ngwa ngwa. Ya mere, ị kwesịrị iji nlezianya tụlee ma ịchọrọ itinye ihe ize ndụ a. Ya mere, ịchọrọ ịkwado iwu ọ bụla.
Isiokwu bu nke aRealkredit
Isiokwu ọzọEgo mgbazinye